Maraykanka, 25 November 2016
Khamiis 25 November 2016
Minneapolis: Kulan Looga Hadlayay Joojinta Muslim Naceybka
Magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxa gelinkii dambe ee Khamiistii shalay lagu qabtay kulan ay soo qaban qaabiyeen jaaliyadda Soomaalida ee gobolkaasi.
Obama oo La Kulmaya Hogaamiyayaasha Yurub
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo ku sugan dalka Jarmalka ayaa maanta hogaamiyayaasha dalalka ugu weyn Yurub kula biiray kulan looga hadlayo caqabadaha dhinaca amniga iyo dhaqaalaha ee ay wajahayaan dalalka saaxiibada ah.
Hillary Clinton: "Waxaan Wajahay Maalmo Adag"
Musharaxii hore ee madaxweynaha Mareykanka Hillary Clinton ayaa sameysay muuqaalkeeda ugu horreeyey ee dadweyne tan iyo markii ay qiratay in Donald Trump uu kaga adkaaday loolanka madaxweynaha.
Dhageyso: Dhalinyaro Soomaali-Mareykanka Ah oo La Maxkamadeeyay
Arbacadii shalay waxa lagu soo gaba gabeeyey magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka, maxkamadeynta 9 dhalinyaro ah oo 8 ka mid ahi ay Soomaali ahaayeen, halka ka kalena uu u dhashay qowmiyadda Oromada ee dalka Itoobiya.
Minnesota: Xukunkii Dhalinyarada oo Lasoo Afjaray
Maxkamadda Minneapolis ayaa soo gabagabaysay xukunka qaatay saddexda maalmood ee lagu riday sagaal dhalinyaro ah, waxaana saddexdii ugu dambaysay ay maanta kala heleen 35 snao oo lagu riday Guuleed Cali Cumar, iyo Maxamed Faarax iyo Cabdiraxmaan Daauud oo helay min 30 sano.
Trump: Wax Walba Si Hagaagsan Ayey u Socdaan
Ayada oo ay soo baxayaan warar sheegaya in khilaaf xooggan oo ku saabsan xubnaha ka mid noqonaya golaha wasiirada cusub ee madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump, ayaa Mr. Trump waxa uu bartiisa twitter-ka soo dhigay in wax walba ay u socdaan si hagaagsan.
MN: Xukunno Dheeraad ah oo Dhacay
Xamza Axmed oo 21 jir ah, Cadnaan Faarax oo 19 jir ah iyo Hanad Muuse oo 21 jir ayey maxkamadu Talaadadii ku riddey xukuno 10 ilaa iyo 15 sano ah, iyaga oo lagu eedeeyey inay doonayeen inay ISIS ku biiraan
Minnesota: Qof Afaraad oo Xukun Lagu Riday
Nin Afraad ayaa magaalada Minneapolis loo xukumay inuu doonayey inuu ku biiro Daacish.
Giuliani oo Hogaaminaya Loolanka Xoghayaha Arrimaha Dibedda
Ilo-wareedyo ku dhow Trump auaa waxa ay sheegayaan in duqii hore ee magaalada New York Rudy Giuliani uu hogaaminayo musharaxiinta xilka xoghayaha arrimaha dibedda Mareykanka
Obama oo Ka Hadlay Siyaasadda Trump
Madaxweyne Obama ayaa sheegay in inta badan aan ereyada quruxoon ee lagu dhawaaqaa aanay samaynin ama aanay noqon siyaasad wanaagsan.
Dhageyso: Dhalinyaro Soomaali Mareykan ah oo La Xakumay
Xaakim ayaa magaalada Minneapolis ee gobolka ay soomaalidu u badanyihiin ee dalkan Maraykanka ee Minnesota xukun ku riday dhalinyaro Soomaali-Maraykan ah oo lagu eedeeyay inay taageerayeen isla markaana qorshaynayeen inay ku biiraan kooxda Daacish.
Minnesota: Dhalinyaro Soomaali ah oo la Xukumay
Dhalinyarao Soomaali ah oo lagu kala magacaabo Cabdullaahi Yuusuf iyo Cabdirisaaq Warsame ayaa noqday kuwii ugu horreeyey ee xukunka uu ku dhaco.